फूटबल – Nepali International Categories – Khel Dainik - Page 342
इंग्लिस प्रिमियर लिगको शीर्ष स्थानमा रहेको चेल्सीले अंक दुरी फराकिलो पार्दा म्यानचेस्टर सिटीले इंग्लिस जितबिहीन यात्रा टुंग्याएको छ । लिभरपुल पनि विजयी भएको छ ।
स्पेनिस ला लिगामा रियल म्याड्रिड बराबरीमा रोकिएको छ तर प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी बार्सिलोना हारेपछि यो बराबरीले पनि उसलाई ठूलो असर भने परेन । जित निकालेको भए बार्सिलोनाले रियल मड्रिडसँग अंक बराबरी गर्ने थियो । शनिवार राती म्याड्रिड डर्बीको खेलमा एट्लेटिकोसंग १-१ को बराबरीमा रोकिएको हो । पोर्चुगिज डिफेन्डर पेपेले रियललाई ५२ मिनेटमा अग्रता दिलाएका थिए। आन्टोन ग्रिजमनले ८५ […]
माल्दिभ्समा किरणको टीम टिसी स्पोर्टसद्वारा युनाईटेड भिक्ट्रि पराजित
खेलदैनिक, २६ चैत / पुनः माल्दिभ्स फर्केका गोलकिपर किरण चेमजोङको टोलीले माले लिगमा जित हासिल गरेको छ । किरण आवद्ध टोली टिसी स्पोर्टस्ले युनाइटेड भिक्ट्रीलाई २–० गोलले हराएको छ । टिसी स्पोर्टस् अलि नाफिउ र अलि नासुदले गोल गरेका थिए । अहिलेसम्म लिगमा दुवै खेलमा टिसी स्पोर्टसले सफलता प्राप्त गरेको छ । किरणले दुई खेलमा एक […]
‘बार्सिलोनाका खेलाडीको कारण’ : १२ गोल खाएका इल्डेनसका प्रशिक्षक
चैत २५ / इल्डेनस क्लबका प्रशिक्षक फिलिपो भिटो डे पियरोले बार्सिलोनाकै कारण क्लबले यति धेरै गोल खाएको बयान दिएका छन्। बार्सिलोना ‘बी’ टिमसँग १२ गोल खाएपछि खेल मिलेमतोको आरोपमा उनी पक्राउ परेका थिए ।
मेसीको उदार दिल, क्यान्सर पीडितलाई सहयोग गर्ने
चैत २५ (एजेन्सी) मेसीले सेभियाविरुद्ध दुई गोलको खुसियाली मनाउन आफ्नो गालामा टसाएर दुई वटा औला राखेका थिए। त्यसको अर्थ के थियो होला ? क्यान्सर पीडित बालबालिकाका लागि सहयोगको आशय रहेको खुलेको छ । सेभियाविरुद्ध गोल गरेपछि मेसीको सार्वजनिक फोटोलाई आफ्नो अभियानको मुख्य तस्बिर बनाउने ‘पारा लस भेलेन्टेस’ ले बताएको छ। मेसीले बार्सिलोनामा बालबालिकाको क्यान्सरका लागि बन्न लागेको […]
ब्राजिल सात वर्षपछि शीर्ष स्थानमा
चैत २४ – सात वर्षपछि ब्राजिल फुटबलको विश्व बरियतामा शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ । विश्वकप लगायतका प्रतियोगितामा क्रमशः कमजोर प्रदर्शन भएसँगै ब्राजिल तल झरेको थियो । विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले बिहीबार जारी गरेको नयाँ बरियता क्रममा ब्राजिल अर्जेन्टिनालाई पछि पार्दै शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो । सन् २०१० को विश्वकपमा नेदरल्याण्डससँग पराजितपछि शीर्ष स्थानबाट झरेको ब्राजिल पहिलो […]
ब्राजिल ७ बर्ष पछी नम्बर १ बन्न सफल !
ब्राजिल ७ बर्ष पछी फिफा बरियतामा नम्बर १ स्थानमा पुग्न सफल भएको छ।
लिभरपुललाई खेलाडी चोर्न खोजेको आरोप, १ लाख पाउन्ड जरिवाना
चैत २४ / इङ्लिस प्रिमियर लिग (इपिएल) क्लब लिभरपुललाई खेलाडी चोर्न खोजेको आरोप लागेको छ । अन्य क्लबको एकेडेमीको किशोर खेलाडीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर आफ्नो क्लबमा तान्न खोजेको आरोप लागेको हो ।
बार्साको जीतमा मेस्सी नायक, रियल शीर्ष स्थानमा कायमै,
चैत २४ – बार्सिलोनाले सेभियालाई ३–० ले पराजित गरेको छ । स्पेनिस ला लिगाको खेलमा बार्सिलोनाले तीन वटै गोल पहिलो हाफमा गरेको थियो ।
किङले लिभरपुललाई स्तब्ध पारे
ईंग्लिश प्रिमिएर लिग अन्तर्गत अन्तिम समयमा किङले गोल गरे पछी लिभरपुल बोउर्नेमाउथ सँग २-२ को बराबरी खेल्न वाध्य भएको छ।
Page 342 of 347« First«...102030...340341342343344...»Last »
गुरुले बनाइ दिए चेलाको घर चैत्र २४, २०७३
तामाङको नेतृत्वमा फुलकन्ट्याक्ट संघ गठन चैत्र २४, २०७३
कोरोना विरुद्ध लड्न सरकारलाई सहयोग गर्न एन्फा तयार चैत्र २४, २०७३
राखेप कै तत्परतामा पोखरामा बन्ने भो अर्को वैकल्पिक रंगशाला चैत्र २४, २०७३
फुटबल संघको साधारणसभा र गोल्डकप स्थगित चैत्र २४, २०७३
भैरवलाई लियो बिक्रम स्मृति कपको उपाधि चैत्र २४, २०७३